व्हिस्कीमा आधारित स्पिरिटहरू के हुन्? - उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
व्हिस्की-आधारित आत्माहरू के हुन्?
व्हिस्की एक्लो एकान्त होइन, न त यो एक्लो हो। व्हिस्कीबाट व्युत्पन्न धेरै पेय पदार्थहरू छन्, र प्रत्येकको आफ्नै स्वाद छ।
व्हिस्की लिकर स्कटल्याण्ड वा आयरल्याण्डबाट उत्पन्न हुन्छ, जहाँ मानिसहरूले नुस्खाको आधारमा व्हिस्कीमा जडिबुटी बिरुवाहरू, मसलाहरू, माहुरीहरू र अन्य सामग्रीहरू थप्छन्। यसको अल्कोहल सामग्री सामान्यतया लगभग 15% हुन्छ र कहिले पनि 20% भन्दा बढी हुँदैन। सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा प्रसिद्ध व्हिस्की लिकर स्कटिश गिबको हनी स्वीट हो, एक सेल्टिक शब्द जसको अर्थ "आनन्दको पेय" हो, स्कच व्हिस्की र हेदर हनी मुख्य सामग्रीको रूपमा।
व्हिस्की क्रीम लिकर
सबैभन्दा परिचित व्हिस्की लिकर प्रसिद्ध बेलीज लिकर हो, जुन सबै प्रमुख सुपरमार्केटहरूमा उपलब्ध छ। यो ब्रिटिश डियाजियो समूहको स्वामित्वमा छ, अन्य प्रसिद्ध ब्रान्डहरू जस्तै जोनी वाकर र J&B, र यसका सामग्रीहरू मुख्य रूपमा चिनी, व्हिप्ड क्रीम, आयरिश व्हिस्की र भेनिला प्लान्टहरू हुन्। अन्य उत्पादनहरूमा Edradour क्रीम लिकर समावेश छ, जुन Edradour एकल माल्ट व्हिस्कीमा आधारित छ।
स्कटल्याण्डले आयरल्यान्डसँग खेल्दैछ
त्यहाँ एक व्हिस्की कन्कोक्शन छ जसले एक पेयमा दुई शत्रुहरू हराउन सक्छ!
आयरिश मिस्ट मह र भेनिला वनस्पति सहितको एक आयरिश मदिरा हो, जसलाई एक आयरिश परिवारको प्रमुखले मात्र रमाउन सक्छ। आयरिश मिस्ट र स्कटल्याण्डको केपेल हनी लिकर मिश्रण "रस्टी मिस्ट" को अद्भुत स्वादले शताब्दीको व्हिस्कीलाई नजिक ल्याउन सक्छ।
अब अधिक र अधिक डिस्टिलरीहरूले रेसिपीहरू विकास गर्न र बजारमा नयाँ प्रकारका आत्माहरू ल्याउन खोजिरहेका छन्। यसले हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई थप र अधिक छनौटहरू पनि दिन्छ, जुन वास्तवमै राम्रो प्रवृत्ति हो!
अघिल्लो: व्हिस्की कसरी प्रशंसा गर्ने?
अर्को: व्हिस्की पिउँदा हामीले के खान्छौं?